APPLE ID ကနေ IPHONE ကိုကိုဇောင်းလုပ်နည်း - IOS အတွက် - 2019
Apple ID ကနေ iPhone ကိုကိုဇောင်းလုပ်နည်း
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရွေ့လျား၏နည်းလမ်း - ပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုဖြေရှင်းဖို့အသုံးပြုနိုင်မယ့်စာရင်းအင်းကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့်, ကမကြာခဏကြိုတင်ခန့်မှန်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ Excel ထဲတွင်, အလုပ်များကိုနံပါတ်ဖြေရှင်းဖို့ဒီ tool ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ရဲ့ Excel ကိုအတွက် Move ပျမ်းမျှသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
ဒီနည်းလမ်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကရွေးချယ်ထားဂဏန်းသင်္ချာအပေါ်ပြောင်းလဲနေသောစီးရီး၏အကြွင်းမဲ့အာဏာတန်ဖိုးအပြောင်းအလဲဒေတာချောမွေ့ကအချို့သောကာလအတွင်းဆိုလိုလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီ tool ကစီးပွားရေးတွက်ချက်မှု, ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း, စတော့ရှယ်ယာဖလှယ်အပေါ်ကုန်သွယ်ရေး၏သင်တန်း, စတာတွေအသုံးပြုသည် အကောင်းဆုံး Excel ကိုမှရွေ့လျားပျမ်းမျှအားနည်းလမ်းဟုခေါ်ဝေါ်သောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် tool ကိုစာရင်းအင်းကုသမှုမှတဆင့် Apply အထုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ထို့အပြင်, တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်, သင် built-in Excel ကို function ကိုသုံးနိုငျ ပျမ်းမျှ.
Method ကို 1: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပက်ကေ့
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအထုပ် တစ်ဦး Excel ကို add-on တစ်ခုကို default အနေဖြင့်ပိတ်ထားသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး, သင်ကပါဝင်သည်ချင်တယ်။
အဆိုပါ tab ကို Moving "File"။ ပစ္စည်းကို click ပါနဲ့ "န့်သတ်ချက်များ".
အဆိုပါပြေး parameter သည်ပြတင်းပေါက်ပြောင်းရွှေ့သင့်ပါတယ် "Add-ons တွေကို"။ အဆိုပါ box ရဲ့အောက်ဆုံးအတွက် "စီမံခန့်ခွဲမှု" parameter သည်သတ်မှတ်ရပါမည် "Excel ကို Add-ins"။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဤနေရာသို့သွားရန်".
ကျနော်တို့အတွက် add-ons တွေကို window ထဲမှာကျလိမ့်မည်။ အမှတ်အနားမှာစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသား Set "အားသုံးသပ်ခြင်းပက်ကေ့" နှင့် button ကို click "အိုကေ".
ဤ action ဗူးပြီးနောက် "ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း" ဒါဟာ activated ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုဖဲကြိုး tab ကိုပေါ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် "ဒေတာများ".
အခုတော့ရဲ့တိုက်ရိုက်ဖြစ်နိုင်ခြေအထုပ်ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားနည်းလမ်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့။ ဒွါဒသမလ 11 ယခင်ခန့်မှန်းချက်ပမာဏကာလများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေပေါ်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးကြပါစို့။ ဒီငါတို့သည်အချက်အလက်များနှင့် tools များနှင့်အတူစားပွဲ populate ကိုသုံးပါ အထုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ.
ကျနော်တို့ tab ကိုမှဖွင့် "ဒေတာများ" နှင့် button ကို click "ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း"အဆိုပါတိပ်ခွေ tools တွေကိုယူနစ်အပေါ်ထားရှိသည့် "အားသုံးသပ်ခြင်း".
ဒါဟာအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်း tools တွေကိုစာရင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ် အထုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ တဦးတည်းအမည်ရွေးပါ "ပျမ်းမျှ Moving" နှင့် button ကို click "အိုကေ".
ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားနည်းလမ်းများ၏ခန့်မှန်းချက်အဘို့ဒေတာ entry ကိုပြတင်းပေါက်စတင်သည်။
လယ်ပြင်၌ "Input ကိုအကွာအဝေး" တွက်ချက်ရပါမည်သည့်ဆဲလ်ဒေတာခြင်းမရှိဘဲဝင်ငွေရှိရာလစဉ်ငွေပမာဏအကွာအဝေး၏လိပ်စာကိုသတ်မှတ်။
လယ်ပြင်၌ "Interval သည်" ဒါဟာနည်းလမ်းချောမွေ့တန်ဖိုးအပြောင်းအလဲနဲ့ကြားကာလကိုသတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာဖွင့်သုံးလအတွင်းချောတန်ဖိုးကို ထား. , ဒါအရေအတွက်ကိုထဲသို့ဝင်စေ "3".
လယ်ပြင်၌ "Output ကွာဟမှု" သင်က data ကို input ကိုကြားကာလမှတဦးတည်းကလာပ်စည်းထက်ပိုဖြစ်သင့်သည်အရာလုပ်ငန်းများ၌ခံရပြီးနောက် output ကိုဘယ်မှာအလွတ်စာရွက်ပေါ်တွင်တစ်ဦးမတရားအကွာအဝေးကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်း setting အကြောင်းကို tick တည်ထောင်ရန်သင့်တယ် "စံအမှား".
လိုအပ်သောလျှင်, သင်ကိုလည်းအမှတ်အနားမှာတစ်ဦးကို tick သတ်မှတ်နိုင်သည် "Displaying ဂရပ်ဖစ်" အမြင်အာရုံသရုပ်ပြများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှု၌မလိုအပ်ပါဘူးပေမယ့်။
အားလုံး settings ကိုလုပ်နေကြသည်ပြီးနောက် button ကို click "အိုကေ".
အခုရလဒ်ကပိုမှန်ကန်သည်အဘယ်အရာကိုသိရှိနိုင်ဖို့နှစ်လတစ်ကာလအတွင်းချောမွေ့လုပ်ဆောင်။ ဤအရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, တဖန်ဒီ tool ကို run "ပျမ်းမျှ Moving" အထုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ.
လယ်ပြင်၌ "Input ကိုအကွာအဝေး" ယခင်အမှု၌ကဲ့သို့တူညီသောအဓိပ္ပာယ်ကိုထွက်ခွာ။
လယ်ပြင်၌ "Interval သည်" အဆိုပါကိန်းဂဏန်းထား "2".
လယ်ပြင်၌ "Output ကွာဟမှု" နောက်တဖန်, အ input ကိုကြားကာလမှတစ်ဦးထက်ပိုဆဲလ်ဖြစ်သင့်သောသစ်တစ်ခုအချည်းနှီးသောတီးဝိုင်းများ၏လိပ်စာဖော်ပြသည်။
အတွက် configuration ၏ကျန်တူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုနောက်မှခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ဒီနောက်တွင်ပရိုဂရမ်ကိုတွက်ချက်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရလဒ်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုမော်ဒယ်များဖြစ်သောပိုမိုတိကျသောဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, ကျနော်တို့စံအမှားနှိုင်းယှဉ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါသေးငယ်တန်ဖိုး, ရလဒ်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကို၏မြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေ။ သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, Two-လတွက်ချက်မှုအတွက်စံအမှားအပေါငျးတို့သတန်ဖိုးများကို3လထက်လျော့နည်းရွေ့လျား။ ထို့ကြောင့်ဒီဇင်ဘာလများအတွက်ခန့်မှန်းတန်ဖိုးနောက်ဆုံးကာလ၌အလစ်များကတွက်ချက်တန်ဖိုးအဖြစ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌, ဒီတန်ဖိုးကို 990,4 ths ။ ရူဘယ်ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်း 2: ပျမ်းမျှ function ကိုသုံးပါ
Excel ကိုမှာရွေ့လျားပျမ်းမျှအားနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးနောက်ထပ်နည်းလမ်းရှိသေး၏။ အသုံးပြု, သင်အစီအစဉ်၏စံလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏နံပါတ်လျှောက်ထားချင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အရာများ၏အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည် ပျမ်းမျှ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအမှု၌ရှိသကဲ့သို့, အားလုံးအတူတူပင်စားပွဲပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ငွေကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအချိန်ကဲ့သို့ပင်ကျွန်တော်တစ်ဦးချောမွေ့အချိန်စီးရီးကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ automated အဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်အရေးယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါဟာတိုင်းနှစ်ဦး၏ပျမ်းမျှတွက်ချက်ဖို့, ပြီးတော့သုံးလရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသုံးပြီးနှစ်ခုသည်ယခင်ကာလအဘို့ပျမ်းမျှတွက်ချက် ပျမ်းမျှ။ ဤအမှုကိုကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာနေ့စွဲပွင့်လင်းတန်ဖိုးများပင်ဖြစ်သည်ကတည်းကသာမတ်လကတည်းကနိုင်ပါတယ်။
မတ်လများအတွက်အတန်းတစ်ခုအချည်းနှီးသောကော်လံထဲမှာဆဲလ်ရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် icon ကို click "Insert ရာထူးအမည်"သောပုံသေနည်းဘားအနီးနေရာချနေပါတယ်။
activated ပြတင်းပေါက် function ကို wizard ကို။ ၏ကဏ္ဍ "စာရင်းအင်း" ကျနော်တို့တန်ဖိုးကိုရှာဖွေနေပါသည် "ပျမ်းမျှ", ခလုတ်ကိုပေါ်မှာကိုရွေးပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ပြေးပြတင်းပေါက်အော်ပရေတာအငြင်းပွားမှုများ ပျမ်းမျှ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူ့ကို Syntax:
= ပျမ်းမျှ (number1, number2, ... )
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌, လယ်ပြင်၌ "နံပါတ် 1" ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုယခင်ကာလ (ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလ) အတွက်ရှိရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝင်ငွေအကွာအဝေးသို့လင့်ထားသည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့လယ်ပြင်၌ရှိသော cursor set နှင့်သင်ထောက်ကူကော်လံအတွက်သင့်လျော်သောဆဲလ်ကို select "ဝင်ငွေခွန်"။ ထိုနောက်မှခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, နှစ်ခုသည်ယခင်ကာလအဘို့ပျမ်းမျှ၏တွက်ချက်မှု၏ရလဒ်ဆဲလ်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်လိမ့်မည်။ ရှိသမျှသည်အခြားသောလအတွင်းကာလအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတွက်ချက်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့ကတခြားဆဲလ်ဖို့ပုံသေနည်းကူးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ function ကိုပါဝင်တဲ့ဆဲလ်၏ညာဘက်အောက်ထောင့်မှ cursor ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါ cursor လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံစံရှိပြီးသောဝစွာလက်ကိုင်, အသွင်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ် Hold နှင့်ကော်လံ၏အဆုံးဖို့ကဆွဲချ။
အခုတော့ဧပြီလတတန်းအတွက်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောကော်လံအတွက်လာမယ့်ဆဲလ်ကိုရွေးပါ။ ခေါ်ရန်ပြတင်းပေါက် function ကိုအငြင်းပွားမှုများ ပျမ်းမျှ ယခင်ကဖော်ပြထားခဲ့တူညီထုံးစံ၌။ လယ်ပြင်၌ "နံပါတ် 1" ကျနော်တို့ကော်လံမှာရှိတဲ့ဆဲလ်များ၏သြဒီနိတ်ဝင် "ဝင်ငွေခွန်" ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လရန်။ ထိုအခါ button ကို click "အိုကေ".
ထို့ကြောင့်တန်ဖိုးများကိုကျွန်တော်တွက်ချက်။2သို့မဟုတ်3လအတွက် anti-aliasing နှင့်အတူ: အခုနောက်ဆုံးသောကာလအဖြစ်ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအရည်အသွေးပင်ဖြစ်သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမျိုးအစားထွက်ရှာရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, စံသွေဖည်ခြင်းနှင့်အချို့သောအခြားအညွှန်းကိန်းတွက်ချက်။ စတင်ကျနော်တို့စံ Excel ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးပြီးအကြွင်းမဲ့အာဏာသှဖေတွက်ချက်ပါလိမ့်မယ် ကို ABSအစားအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောနံပါတ်များဘယ်ဟာသည် module မှသူတို့ကိုပြန်သွားပါ။ ဤသည်တန်ဖိုးမရွေးတစ်လနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဘို့ဝင်ငွေအစစ်အမှန်အတိုင်းအတာအကြားခြားနားချက်ညီမျှဖြစ်လိမ့်မည်။ မေလတွင်တတန်းအတွက်လာမယ့်ကွက်လပ်ကော်လံအတွက် cursor သတ်မှတ်မည်။ ခေါ်ဆိုခ function ကို Wizard ကို.
၏ကဏ္ဍ "သင်္ချာ" function name ကို select "ကို ABS"။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ပြေးပြတင်းပေါက် function ကိုအငြင်းပွားမှုများ ကို ABS။ တစ်ခုတည်းသောလယ်ပြင်၌ "နံပါတ်" ကော်လံမှာရှိတဲ့ဆဲလ်ရဲ့ contents အကြားခြားနားချက်ကိုညွှန်ပြ "ဝင်ငွေခွန်" နှင့် "2 months", မေလ။ ထိုအခါ button ကို click "အိုကေ".
အလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေနေသည်နှင့်3လအတွင်းအဘို့, ရွေ့လျားများအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာသှဖေတွက်ချက်ရန်။ ပထမဦးစွာ function ကိုလျှောက်ထား ကို ABS။ သာဤအချိန်,3လအတွင်းပျမ်းမျှအားဖြင့်ရွေ့လျား၏နည်းလမ်းအားဖြင့်တွက်ချက်အမှန်တကယ်ဝင်ငွေနှင့်စီစဉ်ထားနဲ့ဆဲလ်ရဲ့ contents အကြားခြားနားချက်စဉ်းစားပါ။
နောက်တစ်နေ့အဆင့်ဆွေမျိုးသှဖေတွက်ချက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ညွှန်ပြချက်၏အကြွင်းမဲ့အာဏာသှဖေ၏အချိုးညီမျှသည်။ အနုတ်လက္ခဏာတန်ဖိုးများကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့ပြန်အော်ပရေတာများကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အခွင့်အလမ်းများအသုံးပြုမှုအောင် ကို ABS။ ဒီ feature ၏အကူအညီဖြင့်ဤအချိန်, ကျနော်တို့ကိုရှေးခယျြလများအတွက်အမှန်တကယ်ဝင်ငွေ2လကြာပျမ်းမျှအားရွေ့လျား၏နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးအကြွင်းမဲ့အာဏာသှဖေ၏တန်ဖိုးကိုဝေ။
သို့သော်ဆွေမျိုးသွေဖည်ရာခိုင်နှုန်း form မှာ display ကိုယူ။ ထို့ကြောင့် tab ကိုသွားပါက, သင်ထောက်ကူအပေါ်သင့်လျော်သောအကွာအဝေးကို select "အိမ်"အဘယ်မှာရှိ tool ကိုယူနစ် "နံပါတ်" အထူး format ကိုလယ်ပြင်၌ရာခိုင်နှုန်း format ကိုဖော်ထုတ်။ အဲဒီနောကျပုဆွေမျိုးသှဖေ၏ count ကတစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပြသထားပါသည်။
ကျနော်တို့လုပ်ဆောင်သည့်ဆွေမျိုးသှဖေနှင့်3လ anti-aliasing ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအချက်အလက်များ၏တွက်ချက်မှုမှတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူစစ်ဆင်ရေး။ သာနာမည်တစ်ခုရှိပါတယ်သောစားပွဲပေါ်မှာနောက်ထပ်ကော်လံသုံးပြီးမြတ်များအဖြစ်တွက်ချက်ဘို့ဤအမှု၌ "ABS ။ ပိတ် (3 ​​မီတာ)"။ ထိုအခါရာခိုင်နှုန်း form မှာကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုဘာသာပြန်ဆို။
ထိုအခါမှသာဒီ function ကိုအသုံးမပြုခင်အဖြစ်ဆွေမျိုးသှဖေနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးကော်လံများအတွက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးများကိုတွက်ချက် ပျမ်းမျှ။ ကျနော်တို့ကရာခိုင်နှုန်းယူလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖို့ဆင်ခြေအဖြစ်တွက်ချက်မှုကတည်းကဒါဟာတစ်ဦးအပိုဆောင်းဘာသာပြောင်းစေရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါအော်ပရေတာရာခိုင်နှုန်း format နဲ့ပြီးသားရလဒ် Output ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုငါတို့စံသွေဖည်၏တွက်ချက်မှုထံသို့လာကြ၏။ ဒီအညွှန်ပြချက်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်နှစ်ခုနှင့်သုံးလ၏ချောသုံးပြီးတွက်ချက်မှု၏အရည်အသွေးနှိုင်းယှဉ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စံသွေဖည်အမှန်တကယ်ဝင်ငွေနှင့်လအရေအတွက်အားဖြင့်ခွဲဝေရွေ့လျားပျှမ်းမျှ၏ကွဲပြားခြားနားမှု၏ရင်ပြင်၏ပေါင်းလဒ်၏စတုရန်းအမြစ်နှင့်ညီမျှသည်။ program ကိုတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်, လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကိုသုံးပါလိမ့်မယ် ROOT, SUMMKVRAZN နှင့် ACCOUNT ကို။ ဥပမာအားဖြင့်, မေလနှစ်လချောမွေ့လိုင်း အသုံးပြု. စံသွေဖည်တွက်ချက်ရန်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်အောက်ပါဖို့ပုံသေနည်းလျှောက်ထားပါလိမ့်မည်:
= ROOT (SUMMKVRAZN (B6 ဟာ: B12; C6: C12) / COUNT ဦး (B6 ဟာ: B12))
အလားတူစစ်ဆင်ရေးစံသွေဖည်၏တွက်ချက်မှုဖို့နဲ့3လကျော်ပြောင်းရွှေ့ပျမ်းမျှအားဖျော်ဖြေဖို့။
function ကိုသုံးပြီးသည်ဤညွှန်းကိန်းနှစ်ခုစလုံးအဘို့အတစ်ခုလုံးကိုကာလအတွက်အဲဒီနောကျပျမ်းမျှတန်ဖိုး ပျမ်းမျှ.
အဆိုပါအကြွင်းမဲ့အာဏာသှဖေ, ဆွေမျိုးသွေဖည်ခြင်းနှင့်စံသွေဖည်ကဲ့သို့သော parameters တွေကိုအပေါ်2နဲ့3လမှာရွေ့လျားပျှမ်းမျှမွေ့တဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်တွက်ချက်မှုဖျော်ဖြေသုံးလ anti-aliasing ၏လျှောက်လွှာထက်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောရလဒ်များကိုပေးချောမွေ့နှစ်လကြောင်းသေချာနှင့်အတူဆိုပါတယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါက Two-တစ်လအပေါ်အထက်ပါကိန်းဂဏန်းများပျှမ်းမျှ, ထက်နည်းသုံးလ '' ရွေ့လျားဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်သက်သေဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းလုပ်ငန်းဝင်ငွေများ၏ projected ကိန်းဂဏန်း 990.4 ths ။ ရူဘယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဒီတန်ဖိုး tools တွေကိုသုံးပြီးတွက်ချက်မှုလုပ်, ငါတို့ရရှိထားသောအရာမှတူညီဖြစ်ပါသည် အထုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ.
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက် function Wizard ကို
ကျနော်တို့နည်းလမ်းနှစ်ခုမှရွေ့လျားပျမ်းမျှအားနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတွက်ချက်တဲ့ခန့်မှန်းချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း tools တွေကိုသုံးပြီးဖျော်ဖြေဖို့အများကြီးလွယ်ကူသည် အထုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ သို့သော်အချို့အသုံးပြုသူများကိုအမြဲတမ်းအလိုအလျှောက်တွက်ချက်ယုံကြည်စိတ်ချနှင့်တွက်ချက်မှု function ကိုသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်ကြဘူး ပျမ်းမျှ နှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသော option ကိုအတည်ပြုရန်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သော။ မှန်ကန်စွာပြုသောအမှုသည်မှန်လျှင်, သော်လည်းတွက်ချက်မှုရလဒ်၏ output လုံးဝတူညီလို့ယူဆတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: iPhone X မပတ သငသထသငတအခက ခက (သြဂုတ်လ 2019).